BRB Soup (Beef Ribs Bitter) ~ စန္ဒကူး
ကူးကူးရေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့အိမ်မှာလဲ ဘာကူးတေလို့ခေါ်တဲ့ ၀က်နံရိုးစွတ်ပြုတ် ချက်တယ်။ စလုံးမှာတော့ နာမည်ကြီးပေါ့။ ဆိုင်တွေ ပေါမှပေါ၊ ဒီမှာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ချက်စားရတယ်။
အမဲသားမစားလို့ အမဲရိုးစွတ်တော့ မသောက်ဖူးဘူး ။ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ဆိုတော့ ထူးတော့ထူးသားလို့။ တရုတ်တွေကတော့ ၀က်နံရိုးနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်တာ သူတို့နာမည်ကြီးဟင်းဆိုပဲ။
ဟုတ်ယ်.. အဲဒါအရိုးနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အရသာက တစ်မျိုးကို ထူးနေတာ တီဆွိရေ..
ကြက်ဟင်းခါး သီးကို ဝက်အဆီအသားလေးတွေ နဲ့ ပါးပါးလှီးချက်ရင် အရမ်းစားလို့ကောင်းတယ် အခုလိုမျိုးတော့ မစားဘူးသေးဘူး
မစားဖူးသေးဘူး။ ရုံးပိတ်ရက်မှလုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။ ရှယ်ပဲ...ရွှလွတ်....ဗိုက်ဆာသွားပြီ။း)
အမဲနံရိုးစွပ်ကိုကြိုက်တယ်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးနဲ့တော့ မစားဖူးသေးဘူး။ နည်းရသွားပြီ နောက်တခါ စမ်းကြည့်ရမယ်။ ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ။
I will try with pork rib. I think i will like it as i love bitter melon.
ကူးကူးရေ.. လုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ Thanks